Miangavy anao, masìna azafady andalana iray ao amin'ny trano boazan'ny DJ ho an'ny mofomamy malalanao! (novokarina) - NYE Countdown ho Djs, Vjs, Nightclubs 2019
SKU: DJ DROP 100 - #32 Sokajy: DJ Drops
Miangavy anao, masìna azafady andalana iray ao amin'ny trano boazan'ny DJ ho an'ny mofomamy malalanao! (Vokatra)
(ohatra avy amin'ny Beyonce) Ny vehivavy tokana rehetra dia mampihomehy! (novokarina)
(Ohatra avy amin'ny fialana an-kady) Uhhhhh ... .. Tsy izany fikambanana izany. Tsy misy fanalana alalana! (Novokarina)